FIHAONANA TENY MAHAZOARIVO :: Ao ambadiky ny fifidianana tanteraka ny iraisam-pirenena • AoRaha
FIHAONANA TENY MAHAZOARIVO Ao ambadiky ny fifidianana tanteraka ny iraisam-pirenena
Fanohanana lalim-paka. Nahazo dera tamin’ireo solontenan’ny fianakaviambe iraisam-pirenena tamin’ny voalaza fa ezaka vita manodidina ny fanomanana ny fifidianana filoham-pirenena hatao amin’ny alarobia 7 novambra ho avy izao ny governemanta. Nambaran’i Ramtane Lamamra, iraky ny Vondrona Afrikanina, misahana ny fanelanelanana ny
raharaha pôlitika eto Madagasikara fa “efa vory ireo fepetra hahafahana miroso amin’io fifidianana io”. “Mahatsapa ny maha zava-dehibe ny fana-tanterahana izany izahay”, hoy izy taorian’ ny fihaonana tamin’ny Praiminisitra, teny Mahazoarivo, omaly.
An-kilan’izay, nilaza ny fahafaham-pony amin’ireo fepetra sy andraikitra noraisin’ny fitondram-panjakana sy ny Vaomieram-pirenena mahaleo tena misahana ny fifidianana tamin’ny fikarakarana ny fifidianana ireo mpiara-miombon’antoka amin’i Madagasikara.
Diplomasia Mila fotoana ny fanendrena ireo masoivoho vaovao any ivelany
Teny ratsy adidy…
Kabary ho an’ny firenena.
Fandriampahalemana eto an-drenivohitra Mahasambotra olona roapolo isan-kerinandro ireo miaramila mpisafo
Fahafatesana itoerana ahiahy Mpivady voadona mafy vokatry ny fisakaizan-janany vavy tamina tovolahy iray
Fanafihana teny amin’ny banky Vehivavy hanatitra volabe voatifitra sady voaroba
Loza tao anaty torimaso Mpianaka, herintaona sy 17 taona, maty nihotsahan’ny tany
Fahafatesana ankizy vavy Mpampianatra ahiana ho namono ny mpianany sady voalaza fa sakaizany